Fivarotana kapa sy morontsiraka: eo amintsika ny fiantohana amin'ny dia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao isan-karazany » Fivarotana kapa sy morontsiraka: eo amintsika ny fiantohana amin'ny dia
Antigua & Barbuda Breaking News • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana • Grenada Breaking News • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao lafo vidy • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • Resorts • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • Vaovao Mafana Saint Lucia • Tourism • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Kapa sy morontsiraka
Ny fahatokisana sy fahatokisana dia lasa laharam-pahamehana ho an'ny mpanjifa rehefa manomboka mandeha soa aman-tsara any amin'ny toerana nofinofisiny indray. Izany no antony Sandals® Resorts ary Beaches® Resorts dia manome masoandro, fasika, fialan-tsasatra ary fahatokisana bebe kokoa ho an'ireo vahiny rehefa mamandrika noho ny fandaharana roa fanampiny nanampy ny programa Book With Confidence. Ny orinasan-trano Luxury Included® dia manolotra vaovao Drafitra fiarovana ny dia - Tonga eto amintsika ny fiantohana, ampiasain'ny Trip Mate, izay hovidiana amin'ny anaran'ny vahiny mandeha ho azy ary ampahany amin'ny famandrihan'izy ireo fitsangatsanganana hatramin'ny 6 Oktobra 2020. Tsy mihatra amin'ny famandrihana vaovao fotsiny izany, fa io fananganana natao io mba hampitony ny sain'ny mpanjifa mihatra ihany koa amin'ny famandrihana Sandal sy morontsiraka efa nisy natao talohan'ny 6 Oktobra 2020 ary nitety ny 31 Mey 2021. Ho fanampin'izany, ny mpandeha dia afaka manafoana ny fialan-tsasatra ataon'izy ireo amin'ny fotoana rehetra ary manomana ny fialan-tsasatr'izy ireo amin'ny fahatokisana noho ny vaovao Tombony ho fiarovana amin'ny fanafoanana * avy amin'ny Unique Vacations.
"Ireo mpandeha manao drafitra fialan-tsasatra any Karaiba tsara tarehy dia afaka mahatsapa fahatokisan-tena bebe kokoa noho ny hatramin'izay momba ny diany mankany amin'ny paradisa noho ireo tombo-tsoa fanampiny miampy roa ireo amin'ny programa Book With Confidence," hoy i Adam Stewart, filoha lefitry ny Sandals Resorts International.
"Fantatray fa ny mpivady sy ny fianakaviana dia samy maniry fatratra ny fialan-tsasatra Luxury Included® izay tena ilainay, ary faly izahay manolotra ireo tombontsoa ireo mba hahafahan'izy ireo mamandrika ny vakansy miaraka amin'ny fanomezan-toky fanampiny."
Rehefa nanomboka nanokatra sisintany ireo firenena nosy, ny Sandals Resorts no nanjary trano fandraisam-bahiny voalohany nanokatra ny varavarany manerana an'i Karaiba. Ireo kaonty henjana namboarin'ireo Sandals sy Beaches Resorts dia namela ny fisokafan'ny 12 amin'ireo trano fandraisam-bahiny 18, izay mampiseho fa ny Sandal sy ny Beach Resorts dia miakatra ambony sy mihoatra mba hahazoana antoka fa afaka mankafy ny fialan-tsasatra am-pahatokisana ny mpanjifa, manomboka amin'ny fiaingana ka hatramin'ny fiaingany. Amin'ny alàlan'ny fandaharana Book With Confidence izay namboarina indray dia afaka mamandrika ny fialan-tsasatra ataon'izy ireo ny mpizaha tany ary mifantoka amin'izay tena zava-dehibe - fotoana kalitao miaraka amin'ireo olon-tiana any amin'ireo toeram-pialamboly mahafinaritra indrindra ao Karaiba.
Drafitra fiarovana ny dia - Tonga eto amintsika ny fiantohana!
Mba hanolorana fiarovana bebe kokoa ho an'ny vahiny, ny Sandal sy ny Beach Resorts dia nanampy drafitra fiarovana ny dia vaovao - Tonga eto amintsika ny fiantohana ampiasain'ny Trip Mate izay hovidiana amin'ny anaran'ny vahiny. Ny drafitra dia manolotra ireo mpivady voavidy izao hatramin'ny 31 Desambra 2020, nanitatra tombony ara-pahasalamana nandritra ny fijanonan'izy ireo.
Inona ny drafitry ny fiarovana ny dia - Ny fiantohana dia eto amintsika:
Ny fandaniana ara-pahasalamana dia nanjary anisan'ny fitsaboana aretina, aretina ary / na lozam-pifamoivoizana. Ny COVID-19 dia tsaboina mitovy amin'ny aretina hafa.
Ny fandaniana amin'ny fitaterana mankany amin'ny toerana akaiky indrindra afaka manome fitsaboana aretina na ratra mafy, mafy na mandrahona ny ainy. Ny fandaniana amin'ny fitaterana mody hody any an-trano dia voarakitra ihany koa taorian'ny famindra toerana maika (na ratra na aretina voasarona). Tombony lehibe indrindra $ 100,000 isaky ny olona
Tsy misy fanilihana amin'ny fepetra efa nisy.
Raha mihemotra ny drafitry ny dia ataon'ny vahiny noho ny fahazoan-dàlana ny vahiny, ny drafitry ny fiarovana - Ny fiantohana dia azo antoka ny fandoavana ny vidin'ny trano fanampiny, ny sakafo ary ny fitaterana eo an-toerana. Tombony lehibe indrindra $ 200 isan'andro, isan'olona ary hatramin'ny $ 2,800
Tsy misy fetrany farafahakeliny na farafaharatsiny farafaharatsiny hahazoana fidiana.
Ny famandrihana rehetra natao alohan'ny 6 Oktobra 2020 miaraka amin'ny fanampim-panazavana novidina tamin'ny Plan Mate Travel Protection Plan - Ny drafitra eto amintsika dia hahazo drafi-pitrandrahana fanampiana fanampiny izay mandrakotra:
Fiantohana fiantohana miitatra amin'ny famoahana ny fitsaboana vonjy taitra. 50,000 $ fanampiny ho an'ny olona
Ny fandaniana amin'ny loza sy ny aretina. 75,000 $ fanampiny ho an'ny olona
Raha mihemotra ny drafitry ny dia ataon'ny vahiny noho ny fahazoan-dàlana ny vahiny, ny drafitra fiarovana ny dia lavitra - ny fiantohana dia eo amin'ny $ 2,050 isaky ny olona Maximum.
Tombony ho fiarovana amin'ny fanafoanana *
Manomboka izao ka hatramin'ny 31 desambra 2020, ny vahiny manofa Vacation Luxury Included® dia hanana fahalalana fanampiny fa afaka manafoana ny fialan-tsasatra farafahakeliny 31 andro alohan'ny hahatongavany izy ireo ary mahazo tamberim-bola feno amin'ny ampahany amin'ny vakansy misy sazy sanda. Ny vahiny manafoana 30-15 andro alohan'ny fahatongavany dia hahazo tamberina famerenam-bola 50 isan-jato sy taratasy fanamarinana momba ny dia 50 isan-jato ho an'ny dia ho avy any amin'ny Sandals na Beaches Resort ao anatin'ny 12 volana. Ny mpitsangatsangana koa dia manana fanafoanana fanampiny ao anatin'ny 14 andro ary hatramin'ny andro nahatongavany ho taratasy fanamarinana mandeha mandritra ny 12 volana hatramin'ny daty nitetezana tany am-boalohany.
* Ity tombony ity dia omen'ny Unique Vacations fa tsy tombony fiantohana. Ity tombontsoa ity dia misaraka amin'ny drafitra fiarovana ny dia.
Ny Sandal sy ny Beach Resorts dia manao izay rehetra azo atao mba hanomezana traikefa azo antoka sy tsy misy tohiny ary tsy misy fihenjanana mba hahafahan'ny vahiny manohy mamandrika ny fialan-tsasatra Luxury Included® amin'ny fahatokisana tanteraka. Ity tombotsoan'ny fiarovana ny fanafoanana ity, miaraka amin'ny drafitra fiarovana ny dia - Tonga eto amintsika ny fiantohana Sandal Platinum Protocols ny fahadiovana ary Protocole momba ny fahadiovana ny Platinum, mamela ny mpandeha hitsoaka any Karaiba miaraka amin'ny fahatokisana nantenain'izy ireo.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fomba famandrihana am-pitokisana, tsidiho: